ekhaya / Bible / YeVangeli kaYohane / ch 11 John
11:1 Ke kaloku, bekukho mntu uthile owayegula, ULazaro eBhetani, ukusuka umzi wakulooMariya, noMarta udade wabo.
11:2 UMariya ke lowo wayithambisayo iNkosi ngamafutha aqholiweyo, wazisulayo iinyawo zayo ngeenwele zakhe; umnakwabo uLazaro wayesifa.
11:3 ngoko ke, oodade babo kuye, bathi: "Nkosi, khangela, uyabona, lowo umthandayo uyafa. "
11:4 ke, Bakukuva oku, UYesu wathi kubo: "Esi sifo kufeni, kodwa singenxa yozuko lukaThixo, ukuze uNyana kaThixo azukiswe ngaso. "
11:5 Ke uYesu wayebathanda ooMarta, kunye nodadewabo uMariya, kunye noLazaro.
11:6 Nangona kunjalo, emva akuva ukuba uyafa, ke kunjalo wahlala kuloo ndawo abekuyo iintsuku ezimbini.
11:7 ke, emveni kwezi zinto, wathi kubafundi bakhe,, "Masibuye siye kwelakwaYuda kwakhona."
11:8 Abafundi bathi kuye: "Rabi, namaYuda bade ngoku ukukuxuluba ngamatye nje. Yaye ngaba ubuya uye khona?"
11:9 uYesu wamphendula: "Ngaba kukho na amaxa emini? Ukuba umntu uthi ahambe emini, akakhubeki, ngokuba elubona ukhanyiselo lweli hlabathi.
11:10 Kodwa ukuba uhamba ebusuku, ukhubekile, ngokuba ukukhanya kungekho kuye. "
11:11 Uthe ezi zinto, emva kwalo, Wathi yena kubo: "ULazaro umhlobo wethu, ulele. Kodwa ndiza, ukuze ndimvuse ebuthongweni. "
11:12 Ke ngoko bathi kuye abafundi bakhe, "Nkosi, ukuba ulele, yena uya kuba sempilweni. "
11:13 Ke yena uYesu ubethetha ukufa kwakhe. Ke bona bacinga ukuba wathetha ke bebeba uthetha ngokulala.
11:14 ngoko ke, ngoko uYesu wathi kubo ngokungafihilisiyo, "ULazaro ufile.
11:15 Ndiyavuya ke ngenxa yenu, ukuba ndibe ndingekho khona, ukuze nikholwe. Kodwa masiye kuye. "
11:16 Ke ngoko uTomas, ekuthiwa nguWele, bathi abafundi bakhe, "Masihambe siye, kakhulu, ukuze sife kunye naye. "
11:17 Yaye ngoko uYesu. Kwaye wafumanisa ukuba wayesele eselesengcwabeni iintsuku ezine.
11:18 (Ke kaloku Bethania yayikufuphi neYerusalem, umgama wayo uzizitadiya.)
11:19 Abaninzi bakumaYuda, uMarta noMariya, ukuze babakhuze phezu umnakwabo.
11:20 ngoko ke, uMarta, xa weva ukuba uYesu ukufika, waya kumkhawulela. Kodwa uMariya ehleli ekhaya.
11:21 Wathi ngoko uMarta kuYesu: "Nkosi, ukuba ubulapha, ukuba ubulapha, ange engafanga.
11:22 Nangoku, Ndiyazi ke ukuba yonke into uya kucela kuThixo, UThixo uya kuninika yona. '
11:23 UYesu wathi kuye, "Umnakwenu uya kubuya avuke."
11:24 Athi uMarta kuye, "Ndiyazi ukuba uya kubuya avuke, eluvukweni, ngomhla wokugqibela. "
11:25 UYesu wathi kuye: "Ndim uvuko noBomi. Lowo ukholwayo kum, nangona uye wafa, yena uya kuphila.
11:26 Kwaye bonke abadla ubomi bekholwa kum, abasayi kufa ngonaphakade. Uyakholwa le?"
11:27 Yathi kuye: "Ngokuqinisekileyo, Nkosi. Mna ndiyakholwa ukuba wena unguye uKristu, uNyana kaThixo ophilileyo, ngubani na ndizele ugwebo kweli hlabathi. "
11:28 Wenyuka naye, akuba ezitshilo ezi zinto, Waya ke wabiza udade wabo uMariya, wathi cwaka, bathi, "UMfundisi apha, yaye uyakubiza. "
11:29 Xa weva oku, usuke kamsinya, waya kuye.
11:30 Kuba uYesu akakafiki kwidolophu. Kodwa wayesekuloo ndawo wayedibene kuyo noMarta.
11:31 ngoko ke, amaYuda abenaye endlwini yaye emkhuza, Bathi ke, bakubona ukuba uMariya usuke kamsinya waphuma, amlandela, bathi, "Yena uya engcwabeni, kangangokuba ukuze kulila khona. "
11:32 ngoko ke, xa uMariya akufika apho uYesu ebekhona, owayembona, wawa phantsi ezinyaweni zakhe, kwaye wathi kuye. "Nkosi, ukuba ubulapha, ukuba ubulapha, ange engafanga umnakwethu. "
11:33 Ke ngoku, xa uYesu wabona elila, namaYuda owayefike kunye naye elila, wagcuma emoyeni, wakhathazeka.
11:34 Wathi yena, "Uphi na wambeka?"Bathi bona kuye, "Nkosi, ukuza kubona. "
11:35 Ke uYesu walila.
11:36 ngoko ke, amaJuda athi, "Khanikhangele ukumthanda kwakhe!"
11:37 Ke abathile kuwo bathi, "Ngaba na lo, wawavulayo amehlo alowo uzelwe eyimfama baye bakwazi ukuba lo mntu ukuba afe?"
11:38 ngoko ke, uJesu, kwakhona lokugcuma kwam ngaphakathi ngokwakhe, waya engcwabeni. Laye ke lingumqolomba, kunye ilitye sasimi phezu kwayo.
11:39 uYesu wathi, "Lisuseni ilitye." UMarta, udade owayefile, wathi kuye, "Nkosi, Ke kaloku, ivumba, kuba ngokuqinisekileyo le yimini yesine. "
11:40 UYesu wathi kuye, "Anditshongo na kuwe ukuthi, Ukuba uyakholwa, niya kububona ubuqaqawuli bukaThixo?"
11:41 ngoko ke, Balisusa ngoko ilitye. ke, waphakamisa amehlo akhe, uYesu wathi: "Utata, Ndiya kubulela kuwe ngenxa yokuba uye wandiva.
11:42 Kwaye ndiyazi ukuba uhleli undiva, kodwa mna ndathi oku ngenxa yabantu bonke bemi kufutshane, ukuze bakholwe ukuba wena wandithuma. "
11:43 Akuba ke ezithethile ezi zinto, wadanduluka ngelizwi elikhulu, "Lazaro, phuma."
11:44 yaye ngoko nangoko, lowo owayefile waphuma, ezibotshwe iinyawo nezandla bands oyinkampani. Nobuso bakhe bujikelwe ngeqhiya eyahlukileyo. UYesu wathi kubo, "Ukukhululeka nize nimyeke ahambe."
11:45 ngoko ke, into eninzi yamaYuda, owayeze uMariya noMarta, kwaye ngubani yakuzibona izinto awazenzayo uYesu, bakholwa kuye.
11:46 Ke abathile phakathi kuwo bemka baya kubaFarisi, babaxelela izinto uYesu akwenzileyo.
11:47 Kwaye, ababingeleli abakhulu nabaFarisi intlanganiso yamatyala, yaye babesithi: "Yintoni esinokuyenza? Ngokuba lo mntu afuna imiqondiso emininzi.
11:48 Ukuba kuye sihambe sodwa, ngale ndlela bonke baya kukholwa kuye. Kwaye ke amaRoma eze, athimbe indawo yethu, kwanohlanga lwethu. "
11:49 Kwesuka ke omnye wabo, uKayafa, ekubeni owayengumbingeleli omkhulu ngaloo nyaka, wathi kubo: "Wena musa ukuqonda nto.
11:50 Kananjalo aniqondi ukuba kusilungele, ukuba kufe umntu omnye atshabalale ngenxa yabantu, nokuba isizwe sonke kufuneka singatshabalali. "
11:51 Kodwa akazange athi oku ngokwakhe, kodwa ekubeni owayengumbingeleli omkhulu ngaloo nyaka, waprofeta ukuba uYesu uza kulufela uhlanga.
11:52 Kwaye hayi nje kuphela ngenxa yohlanga, kodwa ukuze abahlanganisele ndawonye abantwana bakaThixo abathe saa.
11:53 ngoko ke, kususela kuloo mini, bahlela ukuba bambulale.
11:54 Kwaye, UYesu akabanga sahamba esidlangalaleni kunye namaYuda. Kodwa yena waya kummandla kufuphi enkangala, ukuya emzini ekuthiwa yeyakwaEfrayim. Yabuya yalala khona nabafundi bakhe.
11:55 Ke kaloku yayikufuphi ipasika * yamaYuda yayikufuphi. Kwaye abaninzi emaphandleni wenyuka waya eYerusalem phambi kwayo ipasika, ukuze bazingcwalisa.
11:56 ngoko ke, baye befuna uYesu. Kwaye bacebisana bodwa, xa emi etempileni: "Ingaba ucinga ntoni? Ngaba uya kuza ngomkhosi?"
11:57 Ke kaloku ababingeleli abakhulu nabaFarisi babewise umyalelo, ukuze ukuba bazi umntu apho ukuze abe, yena embulele ngayo, ukuze nokukuganga kuye.